Nagu Saabsan - Weifang Sinnovation Technology Technology Co., Ltd.
Kusoo dhowrid ilaalin
Weifang Sinnovation Technology Technology Co., Ltd.
Weifang teknolojiyada cilmiga teknolojiga co., Ltd. waa shirkad caafimaad oo casri ah oo ay si wada jir ah u aasaaseen kooxda dawooyinka ee Shandong zhongchuang iyo Bragingant packaging LLC oo laga keenay Mareykanka.
Waxaan nahay xirfadle ku hawlan maaskaro, dawooyinka jeermiska dila, xalka bakteeriyada, bakteeriyada noolaha, cilmi baarista daawada iyo horumarka xoolaha, soosaarka iyo iibinta shirkadaha farsamada gacanta.Shirkaddu waxay muhiimad weyn siineysaa soo bandhigidda shaqaalaha sare ee cilmi baarista iyo shaqaalaha horumarka, dhammaan noocyada kala duwan ee shaqaalaha farsamada gacanta waxay ka yihiin 70% tirada guud ee shaqaalaha, oo ay ku jiraan qaar leh shahaadada Doctor iyo Master Degree. Shirkadda waxay sameysay nidaam maarayn tayo oo ISO oo daboolaya geedi socodka laga soo bilaabo cilmi baarista suuqa, horumarinta wax soo saarka, wax soosaarka illaa adeegga iibka kadib, waxayna u gudubtay shahaadada e CE CE iyo shahaadada FDA. hordhaca iyo tababarka xirfadaha sayniska iyo teknolojiyada, oo waxay horumarisaa iskuul ay iska leedahay isbadalka guulaha sayniska iyo farsamada. Labada agab ee hantida aqooneed ee madax-bannaan iyo alaabada sare ee la soo dhoofiyo labadaba waa la qiimeeyaa. Dhamaan alaabada shirkada waxay leeyihiin xuquuqo aqooneed oo aqooneed oo madaxbanaan waxayna heleen 17 rukumadood, oo ay kujiraan 2 rukhsad wax soo saar.
Shirkadda waxay leedahay tas-hiilaad geedo wanaagsan iyo jawi wax soo saar wanaagsan. Shirkadu waxay leedahay khadka soosaarka otomaatiga ah oo horumarsan waxaana lagu qalabeeyay qalab ogaal heer sare ah, kaas oo hubin kara tayada waxsoosaarka aadka u sarreeya. , fiirogaar u siinta macaamiisha, iyo sii wadida horumarinta farsamada sare, saamaynta ka hortagga wanaagsan, badeecadaha tayada sare leh ee farsamada, waxay noqon doontaa mid xamaasad leh, daacad ah, mas'uuliyad leh faahfaahin kasta, waxaadna gacanta u gelisaa gacanta si aad ula wadaagto farxadda guusha!
Waxaan nahay xirfadle ku hawlan masar, dawooyinka jeermiska dila, xalka bakteeriyada, bakteeriyada noolaha, cilmi baarista daawada xoolaha iyo horumarka, soosaarka iyo iibinta shirkadaha farsamada gacanta.
Adress: Galbeedka wadada Yeai iyo waqooyiga wadada Yongkang, Soonka Horumarinta Dhaqaalaha Weifang
Shiinaha ayaa noqday soo-saaraha ugu weyn iyo ...
Shiinaha ayaa adkeeyay qawaaniinta ...
Shiinaha ayaa adkeeyay kormeerka baaritaanka ...